မိုးရေစက်တွေအောက်က တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ဘယ်အရာတွေက တားဆီးပိတ်ပင်နေလဲ ? | OnDoctor
မိုးရေစက်တွေအောက်က တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ဘယ်အရာတွေက တားဆီးပိတ်ပင်နေလဲ ?
😷 290 Total Cases
😇 200 Recovered
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံ
By OnDoctor Editor	 On Jun 22, 2020
ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်ဖို့…အနာဂတ်အိပ်မက်တွေဆီ အမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားဖို့ အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်က “စိတ်ဓာတ်ခွန်အား”ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ခွန်အားပြည့်နေပါစေ စိတ်ရဲ့စေညွှန်ရာအရပ်ကို အနှောင်အဖွဲ့ကင်းကင်းသွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ..စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ဘယ်အရာကမှ တုပ်နှောင်မထားဖို့ ၊ အနှောင့်အယှက်ကင်းနေဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လူသားတိုင်းခံစားဖူးမဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေကို ပြောပါဆိုရင်တော့ “ရောဂါဝေဒနာတွေ”လို့ပဲဖြေရပါမယ်။
ဒီတော့ စိတ်ရဲ့ အတိုင်းအဆမရှိ ကွန့်မြူးခြေဆန့်နိုင်စွမ်းနောက်ကို ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ပါသွားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ “ဖျားနာခြင်း”ကင်းနေဖို့လိုပါတယ်။
တခါတလေမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလို့ထင်ရတဲ့ ဝေဒနာတွေက နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုအနှောင့်အယှက်တော်တော်ကြီးကြီးမားမား ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမိုးရာသီမှာ အဖြစ်အများဆုံးနဲ့ လူတွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်အပေးနိုင်ဆုံး ရောဂါဝေဒနာတွေထဲမှာတော့ နှာရည်ယိုတာ၊ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ အအေးမိဖျားနာတာတွေက လူတွေကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီးသား ဗီလိန်တွေပါပဲ။ ဒီပြဿနာတွေဟာ နှစ်စဉ် မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို တုံ့နှေးသွားအောင်၊ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် အမြဲဒုက္ခပေးနေကျဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ကတော့ အရင်နှစ်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါဝင်လာချိန်မှာ လူတွေထူးထူးခြားခြားပိုကြောက်လာတဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အအေးမိဖျားနာမှာ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်မှာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်မှာ ပိုကြောက်လာကြပါတယ်။
လူကြားထဲ နှာချေမိမှာ၊ ချောင်းဆိုးရမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို COVID-19 ပိုးသယ်ဆောင်ထားသူတစ်ယောက်လို့ အထင်ခံရမှာမျိုးကို ပိုကြောက်လာကြပါတယ်။
အအေးမိလို့ နည်းနည်းဖျားနာချင်သလိုလို မအီမသာဖြစ်လာချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကိုရိုနာသံသယတွေဝင်လာတတ်သလို သူများတွေဝင်မဲ့ သံသယတွေအတွက်ပါ တွေးပူနေရတာက မနှစ်ကနဲ့ မတူတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အအေးမိဖျားနာ ဝေဒနာတစ်ခုခု အစပျိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းသွားဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက် (၂)ချက် ရှိပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ခံအားကို အမြန်ဆုံးပြန်တက်အောင်လုပ်ပါ။
နေမကောင်းဖြစ်ဖို့ စပျိုးလာတာနဲ့ အစောဆုံးနားဖို့လိုပါတယ်။ မနားမနေ ပေတေပြီး လှုပ်ရှားသွားလာနေခြင်းက ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုဒုက္ခပေးရာရောက်သလို ကိုယ့်ကြောင့်လည်း သူများတွေကို ရောဂါကူးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့
အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ အရည်များများသောက်ပါ။ အစားအသောက်ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ပါ။
နှာစေးဖို့အစပျိုးလာချိန်၊ ကိုက်သလိုခဲသလို မအီမသာစဖြစ်လာချိန်၊ ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းနဲ့ မျက်လုံးတွေစပူလာချိန်၊ အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ လေတွေပူနွေးလာသလို စတင်ခံစားလာရချိန်..ဒီအချိန်တွေရဲ့နောက်မှာ နှာရည်တွေတောက်တောက်ကျလာတတ်သလို နှာခေါင်းပိတ်လာတာ၊ ခေါင်းကိုက်လာတာ စသည်ဖြင့်လိုက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ နောက်မှာတော့ သေချာပေါက် “ဖျားနာခြင်း” တစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝေဒနာတစ်ခုအစပျိုးကာစမှာ အမြန်ဆုံး ဆေးသောက်မိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကို အမြန်ဆုံးတက်အောင် လုပ်မယ်။ ဆေးမြန်မြန်သောက်ထားလိုက်မယ်ဆို တော်ရုံအဖျားအနာဝေဒနာတွေက ပီပီပြင်ပြင်ဖျားနာတဲ့အဆင့်၊ အိပ်ရာထဲလဲတဲ့အဆင့်မရောက်ခင်မှာပဲ ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
အအေးမိဖျားနာခြင်းဖြစ်စေ တုပ်ကွေးဖြစ်စေ များသောအားဖြင့် ဒီဝေဒနာတွေဟာလည်း တပေါင်းတစည်းထဲ ရောက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဆေးကို တစ်လုံးချင်းစီခွဲသောက်နေတာမျိုးထက် တခါတည်း ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဆေးတစ်ခုကို စိတ်ချလက်ချသောက်လိုက်ခြင်းက နေမကောင်းချိန်စိတ်ရှုပ်စရာလည်း ဝေးစေသလို ဆေးများများသောက်ရမှာကြောက်သူတွေအတွက်လည်း ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ညွှန်းစေချင်တဲ့ ဆေးတစ်ခုပြောပါဆိုရင်တော့ ဒီကိုလ်ဂျင် (Decolgen) ကို ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။
Decolgen ရဲ့ အားသာချက်က ဘာလဲ ?
Decolgen ရဲ့ အကောင်းဆုံး အားသာချက်ကတော့ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်းတွေအပြင် နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာမွှန်ခြင်းတွေကို သက်သာစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှာစေးခြင်းရဲ့ အဓိက နောက်ဆက်တွဲပြဿနာက နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် နှာခေါင်းအတွင်းသားမှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေကျယ်လာပြီး ရောင်ရမ်းနေခြင်းကို လျော့ပါးသက်သာစေဖို့ ၊ သွေးကြောလေးတွေ ပြန်ကျဉ်းသွားအောင်အတွက်ကိုလည်း Decolgen က စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်း၊ နှာစေးနှာရည်ယိုနှာပိတ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတဲ့ ဝေဒနာတွေအားလုံးကို တပေါင်းတစည်းထဲ သက်သာစေဖို့ဆိုရင်တော့ အရိုးရှင်းအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးသက်သာစေမဲ့ ဆေးအနေနဲ့ Decolgen ကို ညွှန်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အအေးမိဖျားနာဝေဒနာတွေ မဝင်လာအောင် ကြိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Decolgen နဲ့အတူ “မိမိကစကာကွယ်တဲ” နည်းလမ်းတွေကိုပါ သေချာစွဲစွဲမြဲမြဲ ဆောင်ထားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လူများတဲ့ နေရာတွေရှောင်ပါ။ Mask တပ်ပါ။ လက်ကိုမကြာခဏဆေးပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေထိုင်ပါ။
ဒီနည်းလမ်းတွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဘယ်ရောဂါအတွက်မဆို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Decolgen နဲ့ အတူတူ မိုးရာသီရဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ရင်ဆိုင်ကြရအောင်..